Hlobo luni lwendawo yokudlala yezingane ongayidlala usuku lonke?
Masilungele ukudlala! Namuhla, sizohlola i-Action Planet - inkundla yokudlala yezingane zasendlini engu-4,000. Inezinto eziningi ezipholile zezingane nezinsana ngokufanayo kufaka phakathi amaslayidi angaphezulu kwezindatshana ezintathu eziphakeme! ...
Imikhiqizo kaFunlandia isidlulise ngempumelelo isitifiketi se-TÜV!
Imikhiqizo yenkundla yokudlala yaseFunlandia isidlulile isitifiketi se-TÜV, esibonisa ukuphishekela kwethu okungapheli kwekhwalithi namazinga aphesheya. Ukuqinisekiswa kwe-TÜV yaseJalimane yindinganiso yegolide yezitifiketi eziningi zokuphepha, futhi kuyasijabulisa ukusho ukuthi iFunlandia ...
Izwa ikusasa lokudlala namuhla
Ubuntwana yindawo yokudlala enemibala kakhulu emhlabeni futhi ayivali. Ehlobo awukwazi ukulala, ngakho dlala usuku lonke! Nesithukuthezi ekhaya? Akunankinga ngoba ingane yakho encane ifuna ukuqhuma idlale ngaphandle nawe! ...
Isikhala Esizayo | Ake sibhekisise ikusasa elizayo lezindawo zokudlala zasendlini.
Isikhala esizayo sizalwa ngalokhu. Ngekhwalithi ephezulu, ukufiphaza umngcele ophakathi kokuzijabulisa nobuciko kudala umphumela ohlukile wokufika kubantu ukuze babone umhlaba owodwa ngelensi yobuciko ukuze babambe okwenzekayo namuhla. ...
Lapho ucabanga ngokuvula isikhungo sokuzijabulisa, sinikeze ithuba!
Joyina Umphakathi Wethu
Copyright 2010-2021 funlandia.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot ProductsIbalazweIzingane Zabakhiqizi Bendawo Yokudlala, Izindleko Zasendlini Yokudlala Yangaphakathi, IBig Air Trampoline Park Franchise, Ukwenziwa kweTrampoline Park, Dlala Izinsiza Zezingane, Izinsiza kusebenza ze-Adventure Indoor Playground,